Blogsy, yeeBlogs ezivela kwi-iPad-Geofumadas
Epreli, 2011 Apple - Mac, Internet kunye neBlogs, Uhambo
Kubonakala ngathi ekugqibeleni ndifumene isicelo esifanelekileyo sePad esivumela ukuba ubhale kwiblogi ngaphandle kokubandezeleka okukhulu. Kuze kube ngoku ndibe ndizama BlogPress kunye negosa WordPress, kodwa ndicinga ukuba i-Blogsy yonyulwe ngokwemiqathango ye-WYSIWYG ingaphezulu okanye engekho mncinane.
Nangona kufuneka ndiyicombulule inkonzo ngemifanekiso ebanjwe kwigumbi elifanayo kuba ixhomekeke kakhulu ekusebenzisaneni nento ebanjwe kwiFlickr okanye i-Picasa, ndifumanisa nesisombululo ukuze ndingabi nongezelela ukufaka izikhala phakathi kwemihlathi.
Kodwa ekugqibeleni ndinokuthi:
Sawubona kwiPad yam
Ngelixa siloba kwimangrove yaseLa puntilla, ndiza kuligqibezela eli nqaku ukufumana ukuzithemba. I-Blogsy ineendlela ezimbini zokubonisa: enye ibizwa ngokuba liCandelo eliTyebileyo, kulapho umxholo wokujonga kuqala ubonwa khona, imifanekiso iyarhuqwa kwaye ibekwe apha; elinye icala yi html, nantsi ibhaliwe.
Ukufudukela kwimodi ephuculweyo ukuya kwi-HTML kufuneka udonse umunwe wakho ngokuthe ngqo, kodwa kukufumananga kukufumana ngaphandle koncedo. Ekugqibeleni ndazi ukuba ngengozi.
Kule tafile ungabona ukuba kunokwenzeka ntoni. Kulunge kakhulu, kubhetele kunoko kwenziwa nge-LiveWriter, kwaye le mifanekiso ilandelayo ishwankathela eyona misebenzi iphambili. Itafile ikwachaza okwenziwayo kumacala ahlukeneyo okuhlela.
Ukubhalisa, okanye iiblogi, ilungiswe kwi "seteth" iqhosha, kwicandelo elisezantsi leskrini.
Uyakwazi ukubona izithuba "ezipapashwe", "ulungiso" kunye nolona luhle kunabo bonke, lusekela inguqulo yendawo kunye nento onokuyenza ngaphambi kokulayisha ngokusisigxina.
Ezahlukeneyo iFlickr, iPicasa, uGoogle kunye neeakhawunti zeYouTube zinokucwangciswa. Oku kulungile, kuba phantse unqakrazo olunye uya kufumana iifayile zakho.
Ukufumana imifanekiso, khetha nje kwiphaneli ebizwa ngokuba yi "Dock", chukumisa umfanekiso okhethiweyo ngomnwe wakho kwaye uwurhuqele kumxholo wokubhaliweyo kwimowudi etyebileyo. Kukho iindlela ezikhawulezayo zokufumana embindini, okanye ezingqamene neziphelo zasekhohlo nasekunene.
Umfanekiso uyakhutshwa, kunye ne-voila. Nangona impazamo yangoku kwisicelo ingavumeli ukuba iphinde ifuduswe ngokutsala, ilahlekile.
Emva koko unokuchukumisa kwaye uguqule le miqathango njengokulungelelanisa, ikhonkco, i-alt okanye uyicime. Ungabutshintsha kwakhona ubungakanani, nangona oku kungekho nto iluncedo kuba awukwazi ukongeza ubungakanani ngenombolo yesandla enje nge-450, ngokubanzi ngeminwe kubiza kancinci.
Ukufumana imifanekiso kwisikhangeli, kuya kufuneka ubhale idilesi yephepha elinomdla kuthi, emva koko ubeke umnwe wakho kumfanekiso womdla wethu. Ayisiyo yonke imifanekiso enokutsalwa, njengoko ezinye iisayithi ziyibonisa ngeskripthi, kodwa ngokubanzi, imifanekiso eboniswa ngethegi bonisa iMascot yeFomo.
Bayakhasa beyeke, kwaye voila. Isicaphukiso lukhetho lokuba phantse yonke imifanekiso igcine ikhonkco, enokuthi ibenakho ukuqwalaselwa kwenye indawo kwisicelo ukuyisusa njengengagqibekanga. Njengobungakanani bomfanekiso ngokubanzi (ubukhulu, 450, 300, njl.
Yongeza iividiyo kwiposi
Ngenxa yoku, ukhetho lwe-YouTube lwethebhu ebizwa ngokuba yiDock lukhethiwe. Ke, ekukhetheni, iyarhuqelwa eposini. Ngendlela, umnwe wesibini unokuvumela ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona, emva koko kukhutshwe.
Ukutshintsha iipropathi, chukumisa kwaye uguqule ukhetho olufana nobungakanani, imida, umbala, iividiyo ezinxulumene noko okanye ucime. Unokucwangcisa iinketho ze iframe, njengoko iividiyo zafakwa ngaphambi kokuba zifakwe.
Xa ungena kwikhowudi yevidiyo edibeneyo, ikhethiwe kwi-browser, ikopishwa ize idlulwe kwindawo ekhethiweyo ngeli xesha "ubhale icala”. Ngamanye amaxesha iindleko, kuba iSafari yeselfowuni inomda wayo wokukopa kunye nokuncamathisela ikhowudi, ngakumbi xa idityaniswe nomboniso weFlash.
Kukho ubuncinane iindlela ezimbini:
Eyokuqala kukukhetha isicatshulwa ofuna ukusisebenzisa njengekhonkco kwimowudi "yeTyebile", emva koko indawo ivulwe kwisikhangeli esiqulathe ikhonkco. Nje ukuba umfanekiso okanye indawo ifunyenwe, ubeka umnwe wakho kwaye utsalele kwisicatshulwa esikhethiweyo.
Kuthatha ukuziqhelanisa, kodwa emva kwethutyana kuyasebenza kwaye kubonakala kungcono kum kunokusebenzisa ithegi . Nje ukuba ikhonkco lenziwe, ngonqakrazo unokuguqula iimeko zekhonkco, njengefestile entsha, ukutshintsha ungene kwisizinda sangaphakathi ngokususa indlela yengcambu okanye ukususa ikhonkco.
Enye indlela, rhoqo uhlala kwindlela ecebileyo, nqakraza kwisicatshulwa esisityebi uze ukhethe "iqhosha" lokukhetha kwaye ubhale okanye ukopize i-URL yesiqhagamshelo.
Kulapho uninzi lwabahleli be-Ipad besilele khona. Ukuba kukho inzuzo kwiBlogsy, kukuba kwimo yobutyebi unokufaka ukufomatha, njengokukrwela umgca ngaphantsi, ubhalo olungqindilili okanye italic, nangona ngendlela efanayo ungachukumisa iithegi kwimowudi ye-html.
Ngesinye isikhathi kwakunzima kum ukuba ndikhethe umbhalo, kodwa ekugqibeleni ndifumanisekile ngokuchofoza kabini kwisicatshulwa, ke ndihudula iziphelo zokukhethwa kunye nokudonsa okulula apho umdla ufinyelela khona.
Ngendlela, ndikubonisa eyona foto yam ilungileyo yohambo, ukubuya nje ukusukela kwimini yokuloba. Le yiLa Puntilla, emlonyeni woMlambo iLempa e-El Salvador. Ukuloba, i-catfish nje, i-mutt kunye ne-toadfish ezimbini; Imbi ngokucela ukuphekelwa kwindawo yokutyela kodwa intle kwaye iyonwabisa.
Oku kuyenzeka kakhulu, yenye yezona zinto zibalaseleyo ndizibonileyo, njengoko iququzelela ukhetho lokongeza iilebheli okanye iindidi ngokufanelekileyo. Ikwavumela nokongeza ezintsha kuluhlu esele lukhona.
Unobungozi obubi, obuye bubekwe kwinguqulo ekhutshwe ngoku, eyabhalela incwadi yokuqala yoxwebhu ngalunye kwisihloko sesithuba.
Ukupapasha inqaku elilungeleyo, unokukhetha ukhetho oluchazwe kuyo kwiqhosha elibizwa ngokuba "yiposti yolwazi" okanye wenze ngokulula kakhulu ngokurhuqa iminwe emithathu phezulu. Kukhulu, kwaye kunjalo, phakamisa iqhosha ukuqinisekisa ukuba liyinyani okanye impazamo yesenzo esilula.
Ayilunganga kwisibini semali. Nangona sonke sinethemba lokuba kuya kubakho ukusebenza ngakumbi, ikakhulu ukuze sikwazi ukulayisha imifanekiso egcinwe apha ekhaya okanye ethathwe nge-Ipad2.
Ukuphucula ixesha liye laphunyezwa ... ezininzi
-Usekela iTypPad, Uhlobo oluThuthiweyo, uJoomla kunye neDrupal
-Intlobo ngeelwimi eziliqela, kuquka iSpanish
-Nye indlela yokongeza iimpawu zeWYSIWYG
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukusuka kwii-3D Iidolophu kunye neendlela ze-GIS 2011
Post Next I-Geofumadas: iminyaka eyi-30 ye-AutoCAD kunye ne-MicrostationOkulandelayo »
2 Iimpendulo kwi "Blogsy, yeeBlogs ezivela kwi-iPad"
Andazi ukuba iblogi yakho yeyiphi umhla, kodwa SINOKUFUNDA imifanekiso kwi-camera roll yethu, kwi-ipad, kunye nokulayisha iividiyo ezivela kwisitishi sethu se-YouTube yi-AMAZING APP, sonwabile kakhulu, inkxaso yezobuchwephesha iyamangalisa…. Ndifumana impazamo, i-ipad ithumela umyalezo kubo ngengxaki, emva koko bathumela i-FIXED CODE kwakhona kwi-WP ukuyifaka kwi-WP .. kwi-config.php intle kakhuluoooooooooo
ULance Barton (Blogsy) uthi:
Sawubona, NdingumLance, omnye wabafana abasemva kweBlogsy.
Ndiyabonga ngokubhala ngeBlogsy. Siya kuqhubeka nokuphucula iiBlogs kwaye ngoko sinethemba lokuba olunye usuku luya kuyanelisa i-99.9% yabablogi belapho.
Ukuba ufuna ukuvotela into ongathanda ukuyibona yongezwa kwiBlogsy emva kokuba sele siyenzile ungaya apha- http://www.blogsyapp.com/about
Abasebenzisi abaninzi basixelele ukuba indlela yethu yokwenza iividiyo ibancede kakhulu ukuba bafumane okuninzi kwiBlogsy. Iividiyo zinokufumaneka apha - http://www.blogsyapp.com/how-to